Permian fauna: njirimara, evolushọn, vertebrates na invertebrates | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oge Paleozoic enwere oge 6 nke kewara oge ala. N'oge Oge Permian, emi odude ke ufọt ikuku na Triassic ndụ gosipụtara na nnukwu mgbanwe. Na Permian anụmanụ o nwere dika onye gosiputara ya ihe osise mbu nke mammals tinyere otutu ihe na gbasaa nke ihe ndi ozo di ndu nke di adi. Oge Permian were ihe dị ka nde 48 afọ ma were oge ntụgharị maka ụwa ma na mpaghara ala na ihu igwe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mmalite nke ụmụ anụmanụ Permian.
1 Oge Permian
2 Nnukwu Ọnwụ na ụmụ anụmanụ na Permian
3 Permian anụmanụ
Enwere ọtụtụ ndị ọkachamara na-enyocha oge a ugboro ugboro ebe ọ bụ na enwere ike ịnweta ọtụtụ ozi bara uru. Karịsịa na njedebe nke Permian ọ bụ mmasị na sayensị kemgbe e gosipụtara ya mbibi mbibi kachasị njọ na mbibi kachasị njọ na mbara ụwa niile. Usoro mkpochapu mmadu bu ihe di mkpa karie ka ndi dinosaurs no na Ugochukwu.
Oge ikpochapu ghọrọ ihe a maara dị ka "Nnukwu Ọnwụ" na n'ime ya Ihe kariri 90% nke ihe nile di ndu adila efu. Naanị ụdị ole na ole dị ndụ nyere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ama ama na akụkọ ntolite nke ụwa dịka dinosaurs. Ogologo oge nke Permian na-eme atụmatụ na 48 nde afọ, na-amalite 299 nde afọ gara aga wee kwụsị 251 nde afọ gara aga.
N’oge a, ihu igwe na-agbanwe mgbe niile. Ma na mbido ma na ngwụcha nke oge a, glaciations ka enwetara ma ikuku dị na etiti ya dị ọkụ ma dịkwa mmiri.
Nnukwu Ọnwụ na ụmụ anụmanụ na Permian
N’oge a ụfọdụ ụdị anụmanụ bịara nwee nnukwu ọdịiche dị iche iche. Na nke a, anyị na-ahụ nnukwu evolushọn na-akpụ akpụ nke a na-ewere dị ka mammals. O bukwa na n’akwukwo ndi ozo ana-achota ndi nna nna nke umu anumanu ugbu a. Nke ahụ bụ ịsị, ndị na-enye ara ugbu a sitere na anụ ndị na-akpụ akpụ.
Banyere Nnukwu Ọnwụ bụ otu n'ime ihe mkpochapụ mkpochapụ kachasị mkpa na ụwa dum. O mere n'ime oge a dum na njedebe ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke oge Triassic. Ọ bụ usoro mkpochapụ kachasị njọ nke ụwa dum gabigara. Ọ bụkwa na 90% nke ụdị ihe ndị dị ndụ ndị bi na mbara ụwa nwụrụ. Amachaghị ihe kpatara mkpochapụ mmadụ a, mana enwere ụfọdụ echiche na-anwa ịkọwapụta ihe mere.
N'etiti echiche kachasị emetụta bụ nke a ọrụ mgbawa ọkụ nke mere ka a chụpụ ọtụtụ carbon dioxide na mbara igwe. Dị ka anyị si mara, carbon dioxide a bụ ikuku griinụ nwere ike ijigide okpomọkụ. Nnukwu carbon dioxide e wepụtara na mbara igwe kpatara mmụba na nkezi okpomọkụ gburugburu ebe obibi. Nke a bụ etu o siri mee ka ikuku ghara ịdị na mbara igwe na ọkwa zuru ụwa ọnụ ma ọtụtụ ndị dị ndụ enweghị ike ịnabata ọnọdụ gburugburu.
Ebumnuche ọzọ bụ ihe kpatara ịhapụ hydrocarbons site na oke osimiri na mmetụta nke meteorite. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, ọ bụ oke ọdachi dakwasịrị ọnọdụ niile gburugburu ebe obibi dị na mbara ụwa n'oge ahụ.
N'oge a, e debere ụfọdụ ụdị anụmanụ ndị sitere n'oge ndị gara aga. Otú ọ dị, otu ìgwè dị mkpa nke anụmanụ ọhụrụ dị ka bụ anụ ndị na-akpụ anwụ. A na-ahụta anụmanụ ndị a dị ka nna nna nke mammals ugbu a. A hụrụ ndụ dị iche iche n'oké osimiri.
N'etiti invertebrates nke pụtara na Permian fauna, ụfọdụ aha mmiri dị ka echinoderms na mollusks na-kwuru. Site n’ọmụmụ sayensị dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ịchọta ndekọ ihe ndebe nke bivalves na gastropods, yana ụfọdụ brachiopods. N'ime otu a na ihe ndị dị n'okirikiri mmiri, ndị otu akụkụ okirikiri ebe a hụrụ spongon pụtara. Mụ anụmanụ ndị a bụ ndị malitere ọtụtụ n'ime ala ahịhịa mgbochi.
N'agbanyeghị eziokwu na ọtụtụ n'ime anụmanụ ndị a lara n'iyi, achoputara ihe omuma nke ihe kariri puku umu ano. Ihe puru iche ya bu na ihe ndi ozo chebere umu anumanu a. N'aka nke ọzọ, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọkachasị ụmụ ahụhụ, nwere ezigbo ọfụma dịka ọ dị na oge ndị gara aga. N'oge a ekwesiri ighota na oke umu ahụhụ ahu di nkpa karie taa. N'ime ìgwè anụmanụ a, ọtụtụ iwu ọhụụ pụtara, dịka Diptera na Coleoptera.
N'ịga n'ihu n'ịmụ akwụkwọ vertebrates, anyị na-ahụ na ha nwekwara mmụba dị ukwuu na ịdị iche iche, ma na mbara igwe na mmiri. Azụ bụ anụmanụ kachasị anọchite anya oge a. N'ebe a, anyị na-ahụ chondrichthyans dịka azụ azụ na azụ azụ. Otu n'ime sharks ndị lara n'iyi n'oge Cretaceous na-ebiworị n'oge a. Azụ Sharks n’oge ahụ yiri nke sharks nke oge a, ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu. Ha nwere ike iru naanị mita 2 n'ogologo.
Anyị na-ahụkwa Orthacanthus. Ọ bụ ụdị azụ na-adịghịzi adị. O so na ndi azu shark na odidi ya di iche. Ahụ ya yiri nke ntà ma nwee ụdị ezé dị iche iche. Anyị nwekwara ndị amphibians. Mụ anụmanụ ndị a nwere mmepe. Ha bụ ndị otu dị iche iche dị iche iche ma nwee ike site na sentimita ole na ole ruo 10 mita.
N'ikpeazụ, anyị hụrụ nke ahụ ihe nākpu akpu bu anumanu nke kachasi weputa ihe. N'etiti anụ ndị a na-akpụ akpụ, anyị na-ahụ therapsids ndị bụ otu ìgwè nke mammals a na-ewere dị ka ndị nna nna nke mammals taa. N'etiti njirimara ha dị iche iche, anyị chọpụtara na ha gosipụtara ọtụtụ ụdị ezé ma nke ọ bụla gbanwere ọrụ dị iche iche. Na mgbakwunye, ha nwere aka na ụkwụ 4 ma ọ bụ ụkwụ ha na nri ha dịgasị iche iche. E nwere ma anụmanụ na-eri anụ na ahịhịa ndụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ Permian
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Permian anụmanụ
Hipparchus nke Nicaea